AMISOM oo shuruud ku xirtay Qorshaha Ciiddanka Somalia loogu wareejinayo Ammaanka dalka – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
AMISOM oo shuruud ku xirtay Qorshaha Ciiddanka Somalia loogu wareejinayo Ammaanka dalka
Sii-hayaha xilka Taliyaha Guud ee Ciiddanka AMISOM, Jeneral Charles Tai Gituai oo u dhashay dalka Kenya ayaa sheegay inay socdaan Qorshe Xilliga Kala-guurka ee Ciiddanka AMISOM kaga bixi doonaan dalka Somalia marka la gaarso sannadka 2020-ka.
Jenaralka oo ay hoos yimaadaan Taliska Ciiddanka Isku-dhafka ee AMISOM ayaa sheegay inuu Qorshahaasi yahay mid ay shuruudo ku xiran tahay Taabagelintiisa, isagoo xusay inay Ciiddanka AMISOM diyaar u yihiin inay dhigooda Somalai ku wareejiyaan Sugidda Ammaanka Guud ee dalka.
“Qorshaha Xilliga Kala-guurka waa mid shuruudeysan, waxaan siin doonaan Saldhigyada hore ee aan ka hawl-galno oo shuruud leh, waa inay leeyihiin Kheyraadka iyo Awoodda iyaga u gaarka ah” ayuu yiri Jeneral Charles Tai Gituai
Waxa kale oo uu sheegay inay Boliska haystaan Xabsiyo, Nidaam Garsoore oo shaqeynaya, Dugsiyo iyo Xarumo Caafimaad.
Dhinaca kale, waxa uu tilmaamay in Ciiddanka AMISOM marka la gaaro Xilligaas in laga yaabo inay ku baxaan si shuruudo leh.
Sii-hayaha xilka Taliyaha Guud ee Ciiddanka AMISOM, Jeneral Charles Tai Gituai waxa uu tilmaamay inay Urruka Midowga Europe bixiyeen 100 million oo EURO, si loo xaqiijiyo riyada Qorshaha Xilliga Kala-guurka.
Waxa u utilmaamay in Maalgelintaas la doonayo in la kharaj gareeyo ilaa laga gaarayo sannadka 2020-ka, markaasi oo la rajeynayo inay Somalia ka dhacdo Doorasho Guud.
Dhinaca kale, Jeneraaladda u dhashay Kenya ee qeybta ka Hawlgalka AMISOM waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin inay Ciiddanka Somalia uu ka dhex dhasho Loolan, marka ay Ciiddanka AMISOM ka baxaan Somalia, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Waxay intaasi ku dareen inay Ciiddanka Soomaalida haatan yihiin kuwo Goballadda laga soo ururiyey, isla markaana uu mid kasta Tababar Milliteri ka siiyeen Ciiddamo shisheeye.
Si kastaba ha ahaatee, Ciiddanka AMISOM ee ka kala socda dalalka Jabuuti, Uganda, Kenya, Burundi iyo Ethiopia ayaa la qorsheynayaa inay ka wada baxaan Somalia marka la gaaro sannadka 2020-ka.
Puntland oo iclaamisay dagaal dheer oo ay la galaan Somaliland
Ganacsade Caawa lagu dilay Magalada Muqdisho